Jid ka Fiican, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland Switzerland (WKG)
Markuu Ciise baray naftiisa iyo jidadka Eebbe, wuxuu siiyay aragti cusub wax walba. Wuxuu iyagii tusay jid kafiican, Jidka ruuxa sharciga ah, maahan xarafka (sharciga). Wuxuu iyagii tusay jidka jacaylka halkii uu ku xukumi lahaa iyo qaladka. Wuu keenay (iyo annagaba) hab ka wanaagsan.
Laakiin isagu wuu ogaa inuusan tanaasul lahayn sida loo helo badbaadada. In badan oo ka mid ah sheekooyinkiisa ku saabsan ku-filnaanshaha sharciga ayaa tilmaamaya in ay jirto hal jid oo keliya waxyaabaha qaar. Jidka badbaadadu waa jidka keliya ee Ciise - iyo Ciise oo keliya. "Waxaan ahay jidka, runta iyo nolosha," ayuu ku yidhi Yooxanaa 14,6. Wuxuu ka tagay shaki la'aan inaan loo baahnayn in la raadsado mid kale (Tarjumaad: Nolol Cusub, 2002, oo dhan).
Butros wuxuu ku yidhi Hananas oo ahaa wadaadka sare, Kayafas, Yooxanaa, Aleksanderos, iyo kuwa kale ee wadaadka sare ah, inaynan badbaadi jirin Ciise mooyaane. Ma jiro magac kale oo jannada ku jira oo dhan oo dadku ugu yeeri karaan inay badbaadaan " (Falimaha Rasuullada 4,12).
Bawlos wuxuu sidan ugu celiyay warqaddiisii ​​uu u diray Timoteyos: "Waayo, waxaa jira Ilaah keliya iyo dhexdhexaadiye keliya oo u dhexeeya Ilaah iyo nin. Kani waa Masiixa Ciise, kan nin noqday" (1 Timoteyos 2,5). kuwaas oo raadinaya fursado kale iyo beddelaad kale. «Waa maxay? Ma ii sheegi kartid in ay jirto hal wado oo keliya. Waxaan rabaa inaan xor u noqdo go'aankayga!
Inbadan waxay iskudayaan diimaha kale. Jihooyinka bari ayaa gaar ahaan caan ah. Qaarkood waxay rabaan inay lahaadaan khibrad xagga ruuxa ah, laakiin qaab dhismeedka kaniisad la'aan. Qaarkood waxay u jeestaan ​​sixir. Ka dibna waxaa jira Masiixiyiin u maleynaya inay u baahan yihiin inay ka gudbaan aasaaska rumeynta Masiixa oo keliya. Tan waxaa lagu magacaabaa "Masiixa lagu daray".
Laga yaabee ficilka fudud ee iimaanka, adigoon wax u qaban badbaadada, waxay umuuqataa waddo aad ufudud. Ama aad u fudud. Ama waxay umuuqataa inay aad u fududahay inaad la kulanto tuugga iskutallaabta dusheeda oo codsigiisa fudud ee lagu xasuusto Ciise la oggolaaday. Miyaa laga yaabaa in diiwaanka dambiilaha ee dambiile falalkiisa foosha xun ay dalbadaan in iskutallaabta lagu tirtiri karo kaliya caqiido fudud oo loo yaqaan qof aan garanayn oo iskutalaabta iskutallaabta soo socota? Tuugga iimaankiisa ayaa ku filnaa Ciise. Isaga oo aan kala hadhin, ayuu ninkan u ballan qaaday jannada weligeed ah (Luukos 23: 42-43).
Ciise wuxuu ina tusayaa inaanaan u baahnayn inaan raadinno waxyaabo kale, xulasho ama qaabab kale oo loo mariyo maqaarka bisadda maahmaahda. Waxa keliya oo aan sameyno waa inaan af ahaan ku qiranno inuu ciise yahay Sayidkeenna oo aan qalbigayaga oo dhan aaminsanahay in Ilaah isaga ka sara kiciyey kuwii dhintay oo inaga badbaadi doona (Rooma 10:9).